हप्तामा एकपटक ब्रत बस्दा स्वास्थ्यमा के के फाईदा ? «
हप्तामा एकपटक ब्रत बस्दा स्वास्थ्यमा के के फाईदा ?
प्रकाशित मिति : १५ पुष २०७६, मंगलवार ०८:३४
एजेन्सी । भोक खप्न अत्यन्तै कठिन भएपनि हप्तामा एकपटक १६ देखि १८ घण्टासम्म भोकै बस्नुले स्वास्थ्य सम्बन्धी थुप्रै समस्या समाधान गर्न मद्दत गर्नेछ ।
जीव तथा मानव अध्ययनले ‘द न्यु इङ्ल्यान्ड जर्नल अफ मेडिसिन’ मा प्रकाशित गरेको लेख अनुसार बीचबीचमा ब्रत बस्नुले रक्तचाप घटाउनुका साथै तौल नियन्त्रणमा पनि मद्दत पुर्याउँछ अनि लामो जीवन आयु दिलाउन सक्छ ।
यसअघि पनि चिकित्सकहरुले ब्रत बस्नुलाई मोटोपना, क्यान्सर, मधुमेह र मुटु सम्बन्धी रोगको उपचारका रुपमा सुझाउने गरेको हुँदा त्यसै आधारमा अनुसन्धान गरिएको रिपोर्टमा उल्लेख छ ।
जोन्स होप्किन्स युनिभर्सिटीका न्युरोसायन्सका प्रोफेसर एवम् अध्ययनका लेखक मार्क मेटसनले दुई प्रकारका ब्रत लाभदायक हुने बताएका छन् ।
जसमा पहिलो भनेको दैनिक समय सिमा मिलाएर मात्र खाने, अर्थात दिनमा ६ देखि ८ घण्टाका बीच खाइरहने र त्यसपछिको १६–१८ घण्टा चाहिँ केही नखाइ बस्ने ।
यसैगरी अर्को तरिकामा चाहिँ हप्तामा दुई दिन ब्रत बस्ने वा ५०० क्यालोरी भन्दा बढी नखाने रहेको छ ।
तर प्रायः सबै मानिसहरुले दिनमा तीनपटकसम्म खाने गरेका छन् जसले यो तरिका अपनाउन कठिन बनाइदिन्छ । बिहानको खाना खाएपनि दिउँसकोको खाजा खाने अनि रातिको डिनर गर्ने हाम्रो परम्परागत शैली रहँदै आएको छ ।
त्यस्तै मानिसमा खालि पेट बस्नु स्वास्थ्यका लागि राम्रो नहुने विश्वास पनि रहेको छ ।
यस किसिमको रिसर्च नयाँ भएकाले यता फिजिसियनहरुले यसमा व्यक्तिको अवस्था र ब्रत बस्ने समयलाई ध्यान दिएर मात्र यो तरिका अपनाउन भनेका छन् । म्याटसनका अनुसार भने खाने र ब्रत बस्नेबीच सन्तुलन मिल्नुले शरीरमा ‘मेटाबोलिक स्वीचीङ’ गराउन सक्छ जसले जिवित सेललाई स्वस्थकर राख्न मद्दत गर्दछ ।
मेटाबोलिक स्वीचिङ हुनुले हाम्रो सेलहमा जम्मा भएको ऊर्जा प्रयोग भइ फ्याटलाई ऊर्जामा परिणत गराउँछ ।
बीचबीचमा ब्रत बस्नुले हाम्रो डायटको प्रभावकारीता बढाउने गरेको पनि बताइन्छ तर जीव र मानिसमा गरिएका केही अनुसन्धानमा यसलाई लामो जीवनआयुसँग जोडिएको हो ।
किनकि यसले मुटु स्वस्थ राख्नुका साथै दिमागी क्षमतामा पनि सुधार ल्याउने बताइएको छ ।
यस अध्ययनले ओकिनावाका वासिन्दातर्फ पनि केन्द्रित गराएको छ जो अधिक लामो जीवनका लागि प्रख्यात छन् । उनीहरुको दैनिक डायट अधिक पोषणयुक्त तर थोरै क्यालोरीको हुने गरेको छ । यस्तोमा उनीहरुले वर्षौँदेखि अपनाउँदै आइरहेको ब्रत शैली नै लामो जीवनको कारक हुन सक्ने तर्क गरिएको हो ।
यसका साथै कहिलेकाहिँ ब्रत बस्नुले इन्सुलिन प्रतिरोधमा पनि सुधार ल्याउने गर्दछ जसले रगतमा चिनीको स्तर नियमति गराउँछ । २०१८ को अर्को एक रिसर्चमा टाइप २ डाइबटिज भएका तीन पुरुषले अनियमित ब्रतपछि तौल नियन्त्रण हुँदा इन्सुलिन लिनै नपर्ने भएको थियो ।
म्याटिसन भन्छन्, “यो तरिका अपनाउँदै गर्दा पहिले पहिले भोक खप्न कठिन हुन सक्छ तर दुई हप्ता वा एक महिनापछि हाम्रो शरीर र दिमागलाई यो नयाँ शैलीको बानी पर्छ । ”
किशोरावस्था किशोरावस्थादेखि ३० वर्षसम्मको उमेरसम्म पाचन क्षमता बलियो हुन्छ । मेटाबोलिक रेट तीव्र हुन्छ र
सम्पूर्ण पत्रकारलाई कोरोनाविरुद्धको खोपको व्यवस्था मिलाइने : हिक्मत कार्की
प्रदेश नं १ का आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री हिक्मत कार्कीले प्रदेशमा कार्यरत सम्पूर्ण पत्रकारलाई कोरोनाविरुद्धको
चिनियाँ खोप सिनोभ्याकले पायो नेपालमा आपतकालीन प्रयोगको अनुमति
कोरोना भारइसविरुद्धको चिनियाँ खोप सिनोभ्याकलाई नेपालमा आपतकालीन प्रयोगको अनुमति दिइएको छ। औषधि व्यवस्था विभागले उक्त
भारतबाट ५० लाख डोज कोभिसिल्ड खोप बिचौलिया घुस्न खोजेका कारण ल्याउन नसकिएको-हृदयेश त्रिपाठी
निवर्तमान स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री हृदयेश त्रिपाठीले मन्त्रालयका काम–कारबाहीमा सचिवालयलाई धेरै छुट नदिन नवनियुक्त मन्त्री शेरबहादुर